DJI inobvumidza ayo madrononi kubhururuka pasina internet kuwana | Mahara emahara
DJI inobvumidza ayo madrononi kubhururuka pasina internet kuwana
Imwe yematambudziko makuru auri kuva nawo DJI Mune yavo drones zviri chaizvo izvo, kuti utumire chiratidzo kubva kumutungamiriri kuenda kuchishandiso pachacho kuti chitungamire kwatinoda, zvinofanirwa kushanda nemasaini madhata, kazhinji kubatana kweWiFi iyo, nekuda kwekuvakwa kwayo uye nzira yekushanda, inogona kubiwa. Kune rimwe divi, ichokwadi zvakare kuti mazhinji mafomu aDII anofanirwa kugara achibatana neinternet, kumwe kunokonzera matambudziko.
Mune imwe yezvinoburitswa midhiya yakaburitswa nekambani yeChinese, zviri pachena kuti vatove neboka rakasarudzwa remainjiniya avo nhasi uye vari kushanda mukusimudzira kwe nnyowani yekutaurirana system pakati peanodzora uye drone izvo zvinobvumidza izvi kuti zvishande chaizvo pasina kudikanwa kwekutumira dhata pamusoro penetiweki, izvo zvinozoita kuti zviite zvekudzora kubhururuka nekukurumidza uye zvakanyanya kubatsira.
DJI iri kutoshanda pane imwe nyowani yekutaurirana nzira pasina kudikanwa kweinternet yekubatanidza
Sezviri pachena, iwo zano ravanoshanda paDI rakanyanya kutarisana nekuwana kupa vatyairi zvakawanda zvakavanzika uye chengetedzo mukutaurirana. Zvisinei, zvinoramba zvichionekwa kuti zvese izvi zvingashande sei sezvakawanda zvekushandisa zveDII zvinofanirwa kushandisa internet, semuenzaniso kuwana mepu dzemuno, nzvimbo dzisina kubhururuka uye imwe data iyo inogona kufambisa nendege yakachengeteka kune wese munhu. kubatanidzwa.
Sezvo iwe uchinyatso kuziva, masvondo mashoma apfuura, chimwe chinhu chakafanana chaizvo chakaziviswa kubva kuDII, kunyangwe ichi chivimbiso che shanduko yesoftware yako inopfuurira mberi zvakanyanya. Kunyanya, izvo zvatiinazvo nhasi ndeimwe nzira yekudzosa modzo uko kunyorera kusatumira kana kugamuchira chero mhando yeruzivo kubva paInternet.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Mahara emahara » Drones » DJI inobvumidza ayo madrononi kubhururuka pasina internet kuwana
Delio Alanis akadaro
Iyo DJI Phantom dzakateedzana zvipo hazvidi kuti zvive zvakabatana neInternet kubhururuka. Chigadzirwa chacho chinoiswa mumhepo nendege uye kubhururuka pasina matambudziko. Usape ruzivo rwenhema ...
Pindura kuna Delio Alanis
DJI Phantom akateedzana drones haadi kuve akabatana neInternet kubhururuka. Chigadzirwa chacho chinoiswa mumhepo nendege uye kubhururuka pasina matambudziko. Usape ruzivo rwenhema ...
John Louis Groves akadaro
Iwe hauna kunzwisisa izvo zvinopinda zvinotaurwa nezvazvo.
Pindura Juan Luis Arboledas
Marcelo ferreyra akadaro
"DJI inobvumidza yavo drones kubhururuka isina internet kuwana" Tsamba yacho inogona kunge yakanaka asi zita racho rakaipa kwazvo ... unogona kugara uchibhururuka usina internet kuwana.
Pindura Marcelo Ferreyra
Carlos p akadaro
Clickbait ine misoro yekufona traffic .. ndeipi Mediocrity, uye haifanire kunge iine chimwe chinhu chinobhururuka uye kutaura
Pindura kuna carlos p
MuSpain zvichave zviri pamutemo kugadzira dehwe ne 3D kudhinda kubva kumagumo a2017
Nhanho imwe padhuze nekunzwisisa mashandiro eKapton ne 3D kudhinda